News | नेकपा एमाले
News | Tag: नेकपा एमाले
एमाले बैठक सकियोः ओली–दाहालले पालैपालो सरकार चलाउने
काठमाडौं, फागुन २ । नेकपा एमालेको स्थायी समितिको बैठक सकिएको छ । बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पालैलालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । बैठकमा आजै बसेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगको वान टु वान वार्ताबारे ओलीले व्रिफिङ गराएका थिए ।
एमालेको समानुपातिक सांसदमा मोतीलाल दुगडदेखि समिना हुसेनसम्म (सूचीसहित)
काठमाडौं, माघ २८ । नेकपा एमालेले समानुपातिक सांसदको सूची तयार पारेको छ । आइतबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको बैठकले ४१ जना समानुपातिक सांसदको सूची तयार गरेको हो । एमालेले तयार पारेको सूचीमा परेको ४१ समानुपातिक सांसदको सूची यस्तो छ ।
जताततै ओली गुट हाबी, माधव नेपाल निरीह साबित
काठमाण्डौ, माघ २८ । नेकपा एमालेको प्रदेशस्तरीय संसदीय दलको नेता चयनमा जताततै संस्थापन पक्ष अर्थात केपी ओली गुट हाबी भएको छ ।
संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा कतै आश्चर्यजनक त कतै स्वाभाविक रुपले केपी ओली गुटका नेताहरू निर्वाचित भइरहँदा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको गुट भने निरीह साबित हुन पुगेको हो ।
प्रदेश ४ मा पनि असफल भयाे संसदीय दलकाे नेता सहमतिमै चुन्ने एमालेकाे प्रयास
पोखरा, माघ २८ । प्रदेश नं. ४ मा पनि संसदीय दलकाे नेता सहमतिमै चुन्ने एमालेको प्रयास असफल भएको छ । उक्त प्रयास असफल भएसँगै अब उक्त प्रदेशमा पनि निर्वाचनबाटैै संसदीय दलको नेता चयन हुने भएको छ ।
यसअघि प्रदेश १ र ३ मा पनि दलको नेता सहमतिमा चुन्ने एमालेको प्रयास असफल भएको थियो । उक्त दुई प्रदेशमा संस्थापन पक्ष र माधव नेपाल पक्षबीच गुटगत चुनाव भए पनि प्रदेश ४ मा भने दुवैजना संस्थापन पक्षकै नेताबीच चुनाव हुन लागेको हो ।
ओलीले दिएकाे शुभकामना अष्टलक्ष्मीलाई कुटिल व्यङ्ग्य साबित
काठमाण्डौ, माघ २६ । प्रदेश नं. ३ को संसदीय दलको निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेसँगै नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई आफ्नै अध्यक्ष केपी ओलीले विजयी हुन दिएको शुभकामना कुटिल व्यङ्ग्य साबित भएको छ ।
हिजो साँझ ओली निवास बालकोटमा संसदीय दलको निर्वाचनको सन्दर्भमा अध्यक्ष ओलीसँग परामर्श गर्न पुगेकी शाक्यले निर्वाचन भए आफै विजयी हुने बताएपछि ओलीले विजयको लागि शुभकामना भनेका थिए ।
किन एक्लिदैँ गइरहेछन् केपी अाेली ?
काठमाण्डौ, माघ २५ । वाम गठबन्धनका शक्तिशाली नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पार्टीभित्र र बाहिर विस्तारै एक्लिदैँ गएको संकेतहरू देखा पर्दै गएको छ ।
सानो घेरामा बसेर आफ्नो गुटका नेताहरूलाई मात्रै काखी च्याप्ने आरोप पार्टीभित्र उनलाई पहिला देखि नै लाग्दै आएको हो । नयाँ सरकार निर्माण र वाम एकताको सन्दर्भमा आइपुग्दा उनको गुट झनै साँघुरिदै गइरहेको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली भारतीय नाकाबन्दीताका राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएर प्रचुर लोकप्रियता र शक्ति आर्जन गर्न सफल भएका थिए । गत प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि वाम एकता गर्ने उद्घोष गर्दै वाम गठबन्धन बनाएर सुविधाजनक बहुमत हासिल गरेपछि उनी यतिबेला फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै छ ।
प्रचण्डलार्इ अध्यक्ष मान्न मलार्इ अापत्ती छैन : झलनाथ खनाल
काठमाण्डौ, माघ २५ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रचण्डलाई एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष मान्न आफूलाई कुनै आपत्ती नरहेको बताएका छन् ।
बुधबार राति खनालले एउटा निजी टेलीभिजनलाई लामो अन्तरवार्ता दिदैँ वाम एकतालाई कुनै पनि हालतमा भड्किन दिन नहुने भन्दै प्रचण्डलाई एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष मान्नुपर्ने स्थिति आए पनि त्यसमा तयार हुनुपर्ने बताए ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद आफैंमा राख्न चाहेको गुनासो माओवादी पंक्तिबाट आइरहेका बेला एमालेका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका झलनाथले प्रचण्डलाई अध्यक्ष मान्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
काठमाडौँ, माघ १६ । नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मतदाता रहेका निर्वाचन मण्डलका सदस्यहरु तथा पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सबैलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म देश बाहिर र प्रदेश बाहिर नजान निर्देशन दिएको छ ।
एमाले स्थायी कमिटीको निर्णयः संसदीय दलको नेता सकेसम्म सर्वसम्मत, नभए निर्वाचन
काठमाडौं, माघ १६ । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेशहरुको संसदीय दलको नेता सकेसम्म सर्वसम्मत चयन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सर्वसम्मत नभए निर्वाचन गर्ने तर पार्टी केन्द्रले कुनै दाबाव नदिने निर्णय समेत गरेको छ । संसदीय दलको नेता नै प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने भएकाले यसमा धेरैको चासो छ ।
एमाले स्थायी कमिटी बैठकः मुख्यमन्त्री र सभामुख चयन प्रक्रिया टुंगो लगाउने
काठमाडौं, माघ १६ । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बेठक मंगलबार बस्दैछ । बैठकले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र सभामुखहरुको चयन प्रक्रियाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्दैछ ।
निर्वाचनको संघारमा चार आईजीपी बनाउने सरकारको तयारी, एमालेकाे चेतावनीयुक्त आपत्ति
काठमाडौं, मंसिर १४ । नेकपा एमालेले नेपाल प्रहरीमा चारजना प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को दरबन्दी थप गर्ने सरकारको तयारी प्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । सरकारले चार प्रहरी आईजीपी राख्न अनुमति माग्दै निर्वाचन आयोगमा पत्र लेखेपछि एमाले केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीले आज विज्ञप्ती निकाल्दै निजामति तथा प्रहरी प्रशासनको संरचनामा अनावश्यक भद्रगोल सिर्जना गर्न लागेको भन्दै आयोगको समेत ध्यानकर्षण गराएको छ ।